Driftmoon: Enchanted Edition - Yakagadziridzwa Yekushanya RPG yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Driftmoon: Enchanted Edition - Yakagadziridzwa RPG Rwendo rweLinux
driftmoon mutambo wekutamba mutambo wevhidhiyo uyo wakaburitswa muna2013. Asi ikozvino zvadzokera munhau dzeNew Enchanted Edition yekuvandudza, nerutsigiro rweLinux kuitira kuti igone kunakidzwa kubva papuratifomu ino natively. Iyo yekuvandudza Instant Kingdom hurongwa hwaive hwekuvhura iyo vhezheni ichangopera Windows, asi nekuda kweakateedzana nezvipingamupinyi zvaitofanira kunonoka kwemakore mashoma.
Asi zvirinani kunonoka kupfuura kare… Zvino heino zita iri iro risinganyanyo kuzivikanwa sevamwe, asi iro rakagamuchira kushoropodzwa kwakanaka kwenyaya yaro uye maitiro ayo ekuseka. Uye zvakare, ikozvino neiyo nyowani nyowani iyo ginjini injini yagadziridzwa, iyo yapfuura kubva kune yayo yekare ichishandisa C ++ kodhi kuUniity 3D.
Zvinoenderana neanogadzira iye, Driftmoon ikozvino inogona kumhanyisa natively zvese paWindows uye pane mamwe mapuratifomu akadaro GNU / Linux, macOS, Android uye iOS. Chakavanzika Bhokisi, nyowani yezvinyorwa izere nezvishamiso, yakawedzerwawo.
Kune matsva mavara, mamishini, zvinhu uye kugona mune ino nyowani yekuvandudza kuburikidza Mystery Bhokisi nedzimwe nzvimbo. Graphics izvozvi zvirinani zviratidzwe, nemavara ekuchinja kuti akwane kuratidzwa kwazvino, yakagadziriswa mimvuri, mwenje, nezvimwe
La mushandisi interface Yakagadziridzwa kuve nyore kushandisa, kutaridzika zvirinani, uye kuyera zvihombe skrini. Wedzera kune icho huwandu hukuru hwetsikidzi, kana zviputi, zvakagadziriswa, kusanganisira mimhanzi nerwiyo rwekuwedzera, uye kumwe kuvandudzwa kwakadai sezviyeuchidzo zveumishinari, mukana wekusevha kunyangwe dhisiki rizere, nezvimwe zvakawanda.
Si iwe unofarira Driftmoon, unogona kuiwana kubva kune akasiyana online online vhidhiyo zvitoro. Zvitoro izvi ndizvo zvakajairwa, sezvazviri Humble Store, Valve Steam uye muGOG, kunyangwe mune yekupedzisira kune iyo chete Windows vhezheni parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Driftmoon: Enchanted Edition - Yakagadziridzwa RPG Rwendo rweLinux
kukukurwa du urden akadaro
Haisipo muchiSpanish ... Huya, ndokuona gare gare !!!
Pindura kutsauka du urden
Linux-based mobile operating system postmarketOS inototsigira mazana maviri emafoni